हामीले २ पटक आर यू ओके भन्दा पनि पाइलटले ओके नै भनेका थिए’
फागुन २९ गत्ते, काठमाडौं ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख राजकुमार क्षेत्रीले पाइलटले अन्तिम समयसम्म पनि जहाज ठिक छ भन्दा भन्दै विमान दुर्घटना भएको बताउनुभएको छ । विमानस्थलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा क्षेत्रीले भनेको कुरा यस्तो छ ।
‘मैले टावरको एअर कन्ट्रोलरसित बुझ्दा खेरी के भन्नुभयो भने हामीले नाइन नोटिकल माइन भन्छौं हाम्रो भाषामा प्लेन त्यही अवस्थामा आएपछि हाम्रो टावरले पाइलटलाई दक्षिणतर्फबाट जिरो टु मा अवतरण गर्ने अनुमति दिएका थिए । तर पाइलटल म जिरो टु बाट होइन उत्तरतर्फबाट टु जिरो बाट ल्याण्ड गर्छू भनेछन् र उत्तरतर्फ लागेछन् । उत्तरतिर लागेपछि पनि हाम्रो टावरले तपाइँलाई केही समस्या छ र भनेर सोधे, उनले समस्या छैन भने, तर उहाँ उत्तरतर्फबात अवतरण गर्नुपर्नेमा उत्तरपुर्व गएर दुइ फन्का लगाउनुभयो । फेरी हाम्रा साथीले सोधे तपाइँ त खोइ ल्याण्ड गर्नुभएको छैन, आर यु ओके ? इज दियर एनी प्रोब्लम ? त्यति भन्दा पनि पाइलटले आइ एम ओके, आइ एम अन द वे टु ल्याण्ड भनेका थिए । तर ल्याण्ड गर्दा हाम्रो भाषामा अलाइन्मेन्ट भन्छौं त्यो पटक्कै मिलेको थिएन ।
फेरि हाम्रो कन्ट्रोलरले तपाइँको एलाइन्मेन्ट मिलेको छैन भन्दा उहाँले रेस्पोन्स गर्नुभएन । त्यसपछि जहाज रनवेको सिधा ल्याण्ड गर्नुपर्नेमा त्यसबाट दाइनेतर्फ आर्मीको ह्याङगर हुँदै पार्किङमा रहेका जहाजको नजिकै गएर लडेकोे देखिन्छ । त्यसपछि जहाज नियन्त्रण बाहिर गयो र पुर्वपट्टीको खाल्डोमा गएर आगो बल्यो ।’